ABAGUQUKI 7: I-ERA YE-UNICORN, IIDECEPTICONS EZINTSHA KUNYE NEEROBHOTHI ZECAST (2021) UHLAZIYO LWAMVA NJE - IIMUVI
AbaTshintshi babeyinxalenye ebalulekileyo yeenkumbulo zethu zobuntwana. Ngokukhula, yajika yaba lelona chungechunge lubalaseleyo
AbaTshintshi babeyinxalenye ebalulekileyo yeenkumbulo zethu zobuntwana. Ukukhula, yajika yaba ngawona manqaku mahle kuwo onke amaxesha. Bonke ababukeli bayabathanda abaguquli njengoko inezinto ezininzi ezenziwayo kunye ne-CGI yayo engakholelekiyo ngamanye ama-franchise. Ngumsebenzi omangalisayo wecinematografi. Ikwajongwa ngokubanzi luluhlu olukhulu lwamaqela eminyaka nangoku
Iimuvi ezinje ngeharry potter kunye nelitye lefilosofi
Eyona nto iphambili yayikukusebenza ukuvuselela enye indlela kwi-franchise eyaziwayo. Ingxelo iqala ngomnqweno wokuba yi-Prime Megatron.
IBhunga eliPhakamileyo laseCybertron likhetha inkulumbuso. ICybertron ligama leli lizwe. Ngenxa yokuba wayengenabo ubuchule, uMegatron akazange ahoywe ukuba ahlonishwe. Oku kumenza ukuba akhathazeke. Kwaye xa efumanisa ukuba iOptimus iye yaba nye, uqala imfazwe engachazwanga. Kulapho yaqala khona yonke into! Uthotho lokwenyani lwefilimu ngoku olulindele isahlulo sesixhenxe. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ayinakuze ikhuphe konke konke.
Ke nantsi yonke into oyaziyo malunga neTransformers 7 kwaye kutheni ingabonisi.
Uhlaselo lwetitan lonyaka 2 umhla womoya
Uhlaziyo lwamva nje ngoMhla wokuKhutshwa Abaguquleli 7
Mbini iimveliso ezintsha zeTransformers zikwimisebenzi okwangoku. Enye yezo bhanyabhanya kulindeleke ukuba ibe yinto elandelwayo xa ikhutshwa kutshanje, iBumblebee. Emva kwesahlulo sesihlanu, umphathi we-franchise, uMichael Bay, warhoxa kwisikhundla sakhe.
Ifilimu kuye kwafuneka ukuba ikhuphe kwi-2019. Ngelishwa, ihlehlisiwe ngenxa yezizathu ezingaziwayo. Iya kwingxoxo mpikiswano yokuba abalandeli banokufumana esona sizathu sokurhoxiswa. I-Paramount inomhla ekwabelwana ngawo kumdlalo bhanyabhanya omtsha weTransformer kaJuni 24, 2022. Abalandeli balindele ukuba inento ekusebenzeni kolu ngcelele lweemovie ezizodwa.
Uhlaziyo lwamva nje malunga neTransformers 7 Plot direction
Ababhali bemiboniso bhanyabhanya uJames Vanderbilt noJoby Harold benze izikripthi ezizezinye zokuthatha iiTransformers 7. Okubuhlungu kukwazi nje ukuba ifilimu ayizukuboniswa. Kwisahlulo sesixhenxe seTransformers, wonke umntu wayenokulindela ukubuya kweerobhothi ezaziwayo zasemzini, ezonakalisa ubuntu ngalo lonke idabi. Uluhlu olubizwa ngokuba yiTransformers. I-bumblebee, eyibhanyabhanya eguqula izinto, kulindeleke ukuba abalandeli babe nefilimu entsha.
kungcono ukubiza uSaul ixesha lesi-2 isiqendu 1
Uhlaziyo lwamva nje olunokubakho kwiTransformer 7
Inkqubo ye- Abadlali beTransformer 7 kusengokuqagela okungalawulekiyo kwabaninzi kuba akukho nto ibonakala idibanisa amachaphaza. Wonke umntu unokubona abadlali be-reprising bebeka indawo yabo ephambili ukuba ifilimu eyenzekileyo. Nayiphi na imiba enokubangela uqikelelo olugqwesileyo kumdlalo bhanyabhanya njengoko ngoku kungumbono wabalandeli ayikho enye into. Akukho ngcebiso zikhoyo kule phazili. Nangona kunjalo, bonke abalandeli basenethemba lokuba umenzi wemimangaliso unokulizalisekisa eli phupha lezigidi zabalandeli kwihlabathi liphela.
Kodwa abalandeli zange bayilahle ngokupheleleyo imbono kunye nethemba lokubona imovie entsha yale franchise idumileyo. Inokuhlala iphakama kwaye iza, ukuba abalandeli bayila i-buzz malunga nayo kwi-Intanethi. I-franchise inokuhlala phantsi iphulaphule abaphulaphuli kwaye iphinde iqwalasele, njengokuba isimilo se-Sonic satshintshwa ngokupheleleyo emva kokuba abalandeli baphakamise amazwi abo kwaye benza inkampani yemveliso ukuba iguqule yonke into ngokwethemba labalandeli.
uhlobo lomzingeli x umzingeli
iingqondo zolwaphulo-mthetho kdrama viki
isenzo / imiboniso bhanyabhanya ehlekisayo
uthotho lwekamva ngokulandelelana
ikhowudi geass r3 umhla wokukhutshwa
UJack whitehall uhamba notata wam